Ururka Midowga Yurub oo ansixiyay heshiiskii cimilada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Isabella Lövin (MP), wasiirkacimilada iyo taageerada caalamiga Sweden. sawir: Johan Jeppsson/TT
Ururka Midowga Yurub oo ansixiyay heshiiskii cimilada
EU oo ansixinaysa heshiiskii cimilada ee Paris
La cusbooneeyay fredag 30 september 2016 kl 16.11
La daabacay fredag 30 september 2016 kl 14.52
Wasiirrada cimilada ee ururka EU ayaa maanta qalinka ku duugey ansixinta heshiiskii cimilada ee Paariis. Heshiiskaasina oo hir-geli doona kolka ey 55 ka mid ah waddammadii qaybta ka ahaa ey baarlamaannadoodu ansixiyaan, kuwaasina oo ah waddammada 55% wasakhda geliya cimilada aannu ku nool-nahey.
Wasiirka cimilada iyo taageerada caalamiga ee dalka Sweden Isabella Lövin oo qayb ka ahayd kulanka wasiirrada cimilada ee waddammada ku midoobey EU oo go'aankaa dabadii sheegtay mar ay wareeysi siisay idaacadda Radio Sweden:
- Doodo fara badan ayaa ka dhacay sidii loo ansixin lahaa. Waxay kaloo dooduhu ka taagnaayeen mugga wasakhda ee waddan walbaa lagu waajibiyo inuu wasakhda ka dhimo cimilada.
Waddammada qaarkood ayey ku soo hagaageen iney baaxad ballaaran ka dhimaan wasakhda iyadoona aannu dhaqaaluhu u saamaxayn. Dalka Polan oo kale ayay aad ugu adag tahay inuu si dhakhsiya uga kaaftoomo isticmaalka dhuxusha.
- Iminka waxaa suurtagal ah in culeeysku u bato dhanka inuu heshiiskii Paris hir-galo, isla-markaana uu kulanka bisha noveember lagu qaban doono magaalada Makhrib uu suurtageliyo heshiiskaa.
Waddammada xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub ayaa 11% ku leh kaalinta wasakhda EU står 11% wasakhda cimilada hawada lagu daayo ee caalamka.
Sweden oo oo ansixin doonta heshiiskii cimilada ee Baariis